ကိုဖီအာနနျကျောမရှငျအား အသိအမှတျမပွုကွောငျး အဆိုရှငျ ဦးကြျောဇောဦးက ရခိုငျလှတျတျောသို့ တငျသှငျးသော အရေးကွီးအဆို – Kyaw Zaw Oo's Blog
September 12, 2016 December 15, 2021 kyaw zaw oo
ကိုဖီအာနနျကျောမရှငျအား အသိအမှတျမပွုကွောငျး အဆိုရှငျ ဦးကြျောဇောဦးက ရခိုငျလှတျတျောသို့ တငျသှငျးသော အရေးကွီးအဆို
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်အား အသိအမှတ်မပြုကြောင်း အဆိုရှင် ဦးကျော်ဇောဦးက ရခိုင်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော အရေးကြီးအဆို
ကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်သော ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အား ဖွဲ့စည်း ခဲ့ခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရခိုင်အပါအ၀င် တိုင်ရင်းသားနိုင်ငံသားများ၏ သဘော တူညီချက်ကို ရယူလျက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် ထိုကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်တည်မှု နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အသိအမှတ် မပြုသင့်ကြောင်း အရေးကြီးအဆို။
လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ ခင်ဗျာ . . .
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ (၂၄-၀၈-၂၀၁၆) နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ဟာ ကော်မရှင်လုပ်ငန်းနဲ့ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ဖြစ်သော မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးနေခြင်း အပါအ၀င် ပြစ်ချက် များစွာ ရှိနေတဲ့ အတွက်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သား မဲဆန္ဒရှင်နိုင်ငံသားများထံက ဆင်းသက်တဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ထံသို့ ခွဲဝေရရှိသော အချုပ်အခြာအာဏာရယ် အဲသလိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးအားဖြင့် ရရှိသော အချုပ်အခြာအာဏာတို့ကို အခြေခံလျက် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဟာ ယခုအဆိုမှာပါရှိတဲ့အတိုင်း “ထိုကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်း ဖြစ်တည်မှု နှင့် လုပ်ဆောင်ချက် များအားလုံးကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အသိအမှတ် မပြုကြောင်း” သဘောထား မြွက်ဟဖော်ပြချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ကြေငြာနိုင်ဖို့ အခုလို အရေးကြီးအဆိုအဖြစ် တင်သွင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေများကြောင့် အာနန်ကော်မရှင်လို့ ခေါ်နေကြ တဲ့ ဒီ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ကိစ္စကို အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူကာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အလျောက်၊ လုံလောက်တဲ့အရေအတွက်ရှိတဲ့ ရခိုင် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုတဲ့အတွက် ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူး အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ဘုံရပ်တည်ချက်ကို ဖော်ပြပေးဖို့ရာ ၎င်းတို့ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရ ကျွန်တော် ဦးကျော်ဇောဦး (စစ်တွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်-၂ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်) က ဒီအရေးကြီးအဆိုကို တာဝန်ယူ ရေးသား တင်သွင်းပါတယ်။
ဒီ အရေးကြီးအဆိုရဲ့ အနှစ်ချုပ်သဘောကို ရှင်းလင်းတဲ့ နေရာမှာ အပိုင်းငယ် ငါးပိုင်း ခွဲပြီးတော့ –
အပိုင်း(က) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
အပိုင်း(ခ) ဘယ်သူက ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်
အပိုင်း(ဂ) အာနန်ကော်မရှင်ရဲ့ တခြားပြစ်ချက်များ
အပိုင်း(ဃ) ဆိုးကျိုး ဖြစ်လာနိုင်ခြေအလားအလာ
အပိုင်း(င) နိဂုံး –
ဆိုပြီးတော့ အပိုင်းငယ် ငါးပိုင်းခွဲပြီးတော့ အကျဉ်းသဘော တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အပိုင်း(က) ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၄ မှာ ဘယ်လို ပြဋ္ဌာန်းထား သလဲ ဆိုတော့ “နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှ ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်းလုံး၌ တည်သည်” လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မှာရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်နိုင်ငံသားများဆီက ဆင်းသက်လာတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာဟာ မဲပေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များအားဖြင့် လွှတ်တော်သုံးရပ်ဆီကို ရောက်သွားစေပါတယ်။ အဲသလိုရောက်သွားစေတဲ့ လွှတ်တော်သုံးရပ်ထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆီကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေဆီက အချုပ်အခြာ အာဏာတွေ စီးဆင်းသက်ရောက်လာတဲ့အပြင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ၎င်းတို့ကိုယ်စား စုပေါင်းကိုယ်စားပြုပြောဆိုခွင့်ပါ တပါတည်း ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ-၄၉(ဋ) အရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ပုဒ်မ-၁၁ ရဲ့ ပုဒ်မခွဲ (က) နဲ့ (ခ) တို့အရ နိုင်ငံတော်အချုပ်အချာအာဏာရဲ့ အာဏာသုံးရပ်ကို ခွဲဝေ အပ်နှင်းခြင်းခံရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆီကိုလည်း အာဏာ တွေ ခွဲဝေအပ်နှင်းခြင်း ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ-၆(စ) အရ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်မယ့်၊ နောက် ပြီးတော့ . . . ပုဒ်မ-၂၀(စ) အရ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရမယ့် တပ်မတော်ဟာ ပုဒ်မ-၁၆၁(ဃ) အရ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ခန့်အပ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အထက်က ဖော်ပြခဲ့သလို နိုင်ငံသားတွေဆီက ဆင်းသက်တဲ့ အချုပ် အခြာ အာဏာ၊ နောက်ပြီးတော့ ခွဲဝေအပ်နှင်းခြင်းခံရတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ တို့နဲ့တကွ တပ်မတော်ရဲ့ ပါဝင်မှုတို့ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဟာ လုပ်ငန်းတွေကို ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ-၃၅၄(က) အရ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ မိမိ၏ ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက် များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့် ရှိတယ် လို့ ပြဋ္ဌာန်းထား တယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်များစွာတို့က မဲဆန္ဒရှင်တွေက ဒီ အာနန်ကော်မရှင်အား အသိအမှတ်မပြုနိုင် လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလို လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း မိမိတို့ကို စုစည်းကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကတစ်ဆင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ ထပ်ဆင့် ဆုံးဖြတ် ဖော်ပြကြ စေလိုပါ တယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ပုဒ်မ-၄ အရ နိုင်ငံသားများဆီက ဆင်းသက်တဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ အရ . . . နောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတို့အပ်နှင်းထားတဲ့ စုပေါင်းကိုယ်စားပြုပြောဆိုခွင့်အရ . . . အာနန်ကော်မရှင်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အနေဖြင့် လုံးဝ အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ဒီ အရေးကြီးအဆိုအား ဆွေးနွေးအတည်ပြုကြဖို့ကို အခြားမည်သည့်လွှတ်တော်တစ်ခုခုရဲ့ လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့ . . . သီးခြားလွှတ်တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ . . . ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဆိုတစ်ခုကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်စေကာမူ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ ကာယကံရှင်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က လွှတ်တော်ရဲ့ သဘောထားဟာ နိုင်ငံရေးအရရော သမိုင်းအဓိပ္ပါယ်အရပါ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက် ဒီရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ဒီအရေးကြီးအဆိုကို တင်သွင်း ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအချိန် ဒီနေရာမှာ ဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် ဒီလို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာဟာ လက်ရှိ ဒီကနေ့တင်မက နောင်တစ်ချိန် အနီးအနာဂတ် မှာရော အဝေးအနာဂတ်မှာပါ အရေးကြီးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း(ခ) ဘယ်သူက ကိုယ့်နိုင်ငံသားဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်
၁၉၃၀-ခုနှစ်လောက်ကတည်းလောက်ကပဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားဟုတ်/မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စဟာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယေဘုယျမူကို နိုင်ငံတကာမှာ လက်ခံ ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၀ The Hague မြို့မှာ ကျင်းပ တဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးက နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောတူညီချက် ကွန်ဗန်းရှင်းတစ်ခု (အင်္ဂလိပ်လို) Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law ကို သဘောတူအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲသည်ကွန်ဗန်းရှင်းရဲ့ ပထမဆုံးပုဒ်မ article 1 ပထမဆုံးစာကြောင်းက ဒီလို ဆိုပါတယ်။ It is for each State to determine under its own law who are its nationals. ဘယ်သူဘယ်ဝါဟာ မိမိတို့နိုင်ငံသား ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သတ်မှတ်ဖို့ဟာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံက ၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရသာလျှင် ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ မိမိတို့ နိုင်ငံတစ်ခုချင်းရဲ့ သီးခြားကိစ္စသာလျှင် ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ လိုရင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တစုံတစ်ယောက်ကို နိုင်ငံသားပေးတယ်ဆိုတာ အဲသည်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ ကိစ္စသာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ သီးခြားကိစ္စ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရေးအတွက် အကြံဥာဏ် ပေးဖို့ရာ တာဝန်အပ်နှင်းတဲ့ကော်မရှင်တစ်ရပ်အား နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးကို ဦးဆောင်ခိုင်း တာ၊ ပြီးတော့ တခြား နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦးပါနေတာ၊ သူတို့ကို မိမိတို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စ ကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဟာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ အများကြီး အရှုံးထွက်နေပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာကိုဖီအာနန်လို နိုင်ငံတကာပုံရိပ်မြင့်တဲ့လူတစ်ဦးနဲ့ ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက် စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီတွေကိစ္စကို ဒီလိုပြောဆိုခွင့်ပေးလိုက်တာဟာ ဒီကိစ္စကို မိမိတို့ က မိမိတို့ဥပဒေ အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ကိစ္စ ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စအဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာရှိနေရာကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတကာပြဿနာ ဖြစ်အောင် ဆွဲတင်လိုက်ပြီးသကာလ နိုင်ငံပြင်ပကမဆိုင်သူတွေက ဒီကိစ္စမှာ ၀င်ရောက်ပြောဆိုစွက်ဖက်ခွင့် နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ခွင့် ရယူနိုင် အောင် လုပ်ပေး လိုက်ရာကျသွားပါတယ်။
မစ္စတာကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှု ရဲ့ အခြားသောပြစ်ချက်တွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ မြင်သိနေသူတွေက ထောက်ပြပြီးသား ဆွေးနွေးပြပြီးသား အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရခိုင်လူထုရဲ့ သဘောထား၊ သဘောတူညီချက်ကို တင်ကြိုရယူမှု မရှိခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကို သုံးသပ်အကြံပေးဖို့ ဒီလိုလူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာကို ရခိုင်ပြည်သူတွေကို အဓိကကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကို အရေးအရာ ပြုလို့ အဖက်လုပ်လို့ တိုင်ကိုမတိုင်ပင်ခဲ့တာကိုလည်း မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ (ANP ကို တချက် လောက် ကြိုပြီးတော့ ဆွေးနွေးပေးထားပါဆိုပြီးတော့ ကော်မရှင်ကိုဦးဆောင်မယ့်သူ ကိုယ်တိုင်က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာကိုတောင် ဂရုကို မစိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်)။
(၂) နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကော်မရှင် တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ခွင့်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးထားတာ မရှိဘဲနဲ့ ကျော်လွန်လုပ်ဆောင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ (ဒါ့အပြင် ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုသာဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာနဟာ ဒီလို နိုင်ငံတော်အဆင့်ကော်မရှင်တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိပါဘူး)၊ ဒါကြောင့် ဒီကော်မရှင်ဟာ စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်ပြီး ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီကော်မရှင်ဟာ တရားဝင်မှုမရှိပါဘူး။
(၃) ဒီကော်မရှင်လည်ပတ်ဖို့ ရံပုံငွေကို ဘယ်ကရသလဲ။ နိုင်ငံတော်ကချပေးတယ် ဆိုရင်ကော ဘဏ္ဍာငွေရယူမှုဟာ နည်းလမ်းတကျ ဖြစ်ရဲ့လား။ ပြင်ပအကူအညီ ဖြစ်နေ တယ်ဆိုရင်ကော စေတနာရိုးနဲ့ကူညီတဲ့ အကူအညီဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဒီလိုဖြစ်လာ အောင် OIC ဘက်ကနေပြီးတော့ တည်ထားတာ ကြာပြီ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်လောက် ကတည်းက စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ် လို့ပြောနေကြတာကော ဟုတ်နိုင်ပါသလား။ မေးစရာ တွေရှိပါတယ်။
(၄) နိုင်ငံတော်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး ဦးဆောင်တဲ့ ဒီ အာနန်ကော်မရှင်ထဲမှာ အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုထည့်တာဟာ protocol နဲ့ ညီမညီကို စဉ်းစားစရာ ရှိပါတယ်။
(၅) ကော်မရှင်မှာပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား သုံးဦးရဲ့ဘက်လိုက်မှု ကင်းခြင်း/မကင်း ခြင်းဟာ သံသယမကင်းဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မစ္စတာ ဂါဆန်ဆလမ် ဟာ International Crisis Group ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပြီးတော့၊ Open Society Institute ရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်တယ် လို့ သိရတယ်။ International Crisis Group ဟာ ရခိုင်ပြည်ရောက် စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီများ နဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ဖက်သတ် ရေးသားမှုတွေပါတဲ့ အစီရင်ခံစာ ရေးသားဖူးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Open Society Institute ဟာလည်း ရခိုင်ပြည်ရောက် စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီ များ ဘက်က အားတက်သရော စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပါနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ သူခိုး နဲ့ အိမ်ရှင်ဘက်မှာ သူခိုးဘက်က ဘက်လိုက်နေတဲ့ သဘောရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
(၆) ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီတွေပြဿနာမှာ လိုအပ် နေတာက ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ကြားနေမှုကို လိုအပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ ဘက်က ဘက်လိုက်ရပ်တည်မှုကိုသာလိုအပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပြဿနာကို အရှိအတိုင်း ရှင်းလင်းဖြေရှင်းဖို့ကသာလျှင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းဖြစ် ပါ တယ်။ သူခိုး နဲ့ အိမ်ရှင်အကြားမှာ ကြားနေခြင်း ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်းဟာလည်း သူခိုးဘက် က ဘက်လိုက်ခြင်း တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၇) မစ္စတာကိုဖီအာနန်ကိုယ်တိုင် စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ လူမျိုးလိမ် နာမည်ကို ယခုအခါ သုံးစွဲပြောဆိုနေပါတယ်။ ဒါဟာ ပဋိပက္ခကြီးမားအောင် လုပ်ဆောင် နေရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ လုံးဝမရှိတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကော်မရှင်အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကို နစ်နာအောင် ဆောင်ရွက်သွားဖွယ် ရှိတယ်ဆိုတာကို သိသာစေတဲ့ ပြောဆိုချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း (ဃ) ဆိုးကျိုး ဖြစ်လာနိုင်ခြေအလားအလာ
သူခိုး နဲ့ အိမ်ရှင်ကြားက အဆုံးအဖြတ်ဟာ အိမ်ရှင်ရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့် နဲ့ အိမ်ရှင်ရဲ့မိမိအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်တို့ကသာလျှင် အဆုံး အဖြတ် ဖြစ်စေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ခွင့်တွေက အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်ရမယ့်အစား သူခိုးရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက ကြားက၀င်လာပြီးတော့ ငါတို့ဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ် ဆိုတာ ဟာ မဆုံးဖြတ်ရသေးခင်ကတည်းက အိမ်ရှင်ကို အရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
လူအခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး . . . ရဲလုပ်ငန်းလို စုံစမ်း စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ မည်မျှပင်ဆိုစေကာမူ လုံခြုံရေးအမြင်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ရှေ့ကိုလှမ်းမျှော်တွက်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီကော်မရှင်ရဲ့ ၀င်ရောက်စွက်ဖက် ပါဝင်နေမှုဟာ စိတ်မကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစရှိ နောင်နောင် ဆိုသလို နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်စွက်ဖက် လုပ်ဆောင်မှုတွေ နောင်အခါမှာ အကျင့်ပါ လုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ အစဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကော်မရှင်အနေနဲ့ “ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခံယူသူများ၏ ပင်ရင်း နိုင်ငံနှင့် နောက်ခံအကြောင်းအရာ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာဆက်နွှယ်မှုတို့ကိုလည်း” သုံးသပ်သွားမယ်လို့ ပြောထားတာဟာ အလွန်တရာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလာတာပါလို့ ပြောပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အနေချောင်အစားချောင်အောင် လုပ်ကြံပြောဆိုခိုလှုံနေကြသူ အရေအတွက် သန်းချီတယ်လို့ ဆိုကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီများအနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လာရောက် အခြေစိုက်နိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုသာ ဒီကော်မရှင်ကသာ ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ခွဲဝေရရှိထားတဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ ကျဆုံးသွားဖို့ လမ်းစဖြစ်တယ်။ ဒီကနေတစ်ဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေရသွားတဲ့ ကြီးကြီးမားမား ခြေကုတ်စခန်းကနေ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကျဆုံးသွားစေဖို့ကို သူတို့ ဆင့်ကဲ လုပ်ဆောင် သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုကတည်းကိုက လူမျိုးလိမ်နာမည်ကို ထည့်သွင်းပြောဆိုနေသူ ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ ဘင်္ဂါလီများရဲ့တစ်ဘက်လှုပ်ရှားမှုကို အစဉ်အဆက် လုပ်ဆောင်လာသူများအတွက် နိုင်ငံတကာမှာ အစဉ်အဆက် ကိုးကားစရာ တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာဟာ အများသိအောင် ထုတ်ပြန်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အာမပင်ခံစေကာမူ အများသိနိုင်တဲ့ နေရာကို အနှေးနဲ့ အမြန်ရောက်လာမှာ မုချပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အပိုင်း (င) နိဂုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများရဲ့ သဘောဆန္ဒသာလျှင် အဓိကအကျဆုံး အရေးအပါဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မဆို ဖြေရှင်းစေကာမူ၊ ဒီပြဿနာ ပြေလည်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ ဖြေရှင်းရင် ဒီပြဿနာကို ပိုမိုကြီးထွားလာအောင် လုပ်ရာသာ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို မရယူဘဲနဲ့ ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ ဒီကော်မရှင်ရဲ့ပြစ်ချက်များစွာထဲမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြစ်ချက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်သဘောကို ပြောရရင်တော့ – တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ဆိုးကျိုးအလားအလာ ပေးနိုင်ခြေများတဲ့ ဒီကော်မရှင်ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဆန့်ကျင်သွားဖို့လိုပါတယ်။
ဒီကော်မရှင်ဟာ တည်ဆဲဥပဒေတွေကို ကျော်လွန်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စတင် ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်မှု မရှိပါ ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဒီကော်မရှင်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာမှုကို ကျွန်တော်တို့ အသိအမှတ် မပြုဘူး။ ဒီ ကော်မရှင်ရဲ့ လက်ရှိလည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေမှု တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အယုံအကြည် မရှိဘူး၊ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အကောင်းဆုံးက ဒီကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်း လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းသည်ဖြစ်စေ မဖျက်သိမ်းသည်ဖြစ်စေ သေချာတာကတော့ ဒီကော်မရှင်ကို ကျွန်တော်တို့က လုံးဝ အသိအမှတ်မပြုဘူး ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက နိုင်ငံသား မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆန္ဒတွေအဖြစ် ဖော်ပြနေမယ့်အစား ရခိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ မြွက်ဟဖော်ပြချက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ဖော်ပြမှသာလျှင် နောင်အခါ ကျရောက်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ ဒီကော်မရှင်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ အင်အားရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ယခုတင်သွင်းတဲ့ အရေးကြီးအဆို “ကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်သော ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရခိုင်အပါအ၀င် တိုင်ရင်းသားနိုင်ငံသားများ၏ သဘောတူညီချက်ကို ရယူလျက် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ထိုကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်မှု နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အားလုံးကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အသိအမှတ်မပြုသင့်ကြောင်း အရေးကြီးအဆို” ဒီ အရေးကြီးအဆိုကို ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးအတည်ပြုပြီးတော့ ဒီကော်မရှင် ကို အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အား အတည်ပြုချမှတ်ပေး စေလို ပါကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
ကိုဖီအာနနျဦးဆောငျသော ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာအကွံပေးကျောမရှငျအား ဖှဲ့စညျး ခဲ့ခွငျးသညျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ရခိုငျအပါအဝငျ တိုငျရငျးသားနိုငျငံသားမြား၏ သဘော တူညီခကျြကို ရယူလကျြ ဖှဲ့စညျးခဲ့ခွငျးမဟုတျသညျ့အတှကျ ထိုကျောမရှငျ၏ ဖှဲ့စညျး ဖွဈတညျမှု နှငျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားအားလုံးကို ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောက အသိအမှတျ မပွုသငျ့ကွောငျး အရေးကွီးအဆို။
လေးစားအပျပါသော လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌကွီးနှငျ့တကှ တပျမတျောသားကိုယျစားလှယျမြား အပါအဝငျဖွဈတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျတျောကွီးမြား ခငျဗြာ . . .
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံး ဝနျကွီးဌာနရဲ့ (၂၄-၀၈-၂၀၁၆) နေ့ သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ ဖှဲ့စညျးတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာအကွံပေးကျောမရှငျဟာ ကျောမရှငျလုပျငနျးနဲ့ တိုကျရိုကျ သကျဆိုငျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအပါအဝငျ ဖွဈသော မိမိတို့နိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာကို ထိပါးနခွေငျး အပါအဝငျ ပွဈခကျြ မြားစှာ ရှိနတေဲ့ အတှကျ၊ ရခိုငျပွညျနယျသူပွညျနယျသား မဲဆန်ဒရှငျနိုငျငံသားမြားထံက ဆငျးသကျတဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာရယျ၊ နောကျပွီးတော့ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောထံသို့ ခှဲဝရေရှိသော အခြုပျအခွာအာဏာရယျ အဲသလိုနညျးလမျးနှဈမြိုးအားဖွငျ့ ရရှိသော အခြုပျအခွာအာဏာတို့ကို အခွခေံလကျြ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောဟာ ယခုအဆိုမှာပါရှိတဲ့အတိုငျး “ထိုကျောမရှငျ၏ ဖှဲ့စညျး ဖွဈတညျမှု နှငျ့ လုပျဆောငျခကျြ မြားအားလုံးကို ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောက အသိအမှတျ မပွုကွောငျး” သဘောထား မွှကျဟဖျောပွခကျြကို ဆုံးဖွတျပွီး ကွငွောနိုငျဖို့ အခုလို အရေးကွီးအဆိုအဖွဈ တငျသှငျးရတာ ဖွဈပါတယျ။
အရေးပျေါဖွဈပျေါလာတဲ့ အခွအေနမြေားကွောငျ့ အာနနျကျောမရှငျလို့ ချေါနကွေ တဲ့ ဒီ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာအကွံပေးကျောမရှငျကိစ်စကို အထူးအစညျးအဝေး ချေါယူကာ ဆှေးနှေးဆုံးဖွတျဖို့လိုအပျလာတဲ့အလြောကျ၊ လုံလောကျတဲ့အရအေတှကျရှိတဲ့ ရခိုငျ ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက လကျမှတျရေးထိုးတောငျးဆိုတဲ့အတှကျ ဒီကနေ့ စကျတငျဘာလ (၁၂) ရကျနေ့ ရကျစှဲနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျော အထူး အစညျးအဝေးကို ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ လကျမှတျရေးထိုးတောငျးဆိုတဲ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှရေဲ့ ဘုံရပျတညျခကျြကို ဖျောပွပေးဖို့ရာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့တာဝနျပေးခကျြအရ ကြှနျတျော ဦးကြျောဇောဦး (စဈတှမွေို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ-၂ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ) က ဒီအရေးကွီးအဆိုကို တာဝနျယူ ရေးသား တငျသှငျးပါတယျ။
ဒီ အရေးကွီးအဆိုရဲ့ အနှဈခြုပျသဘောကို ရှငျးလငျးတဲ့ နရောမှာ အပိုငျးငယျ ငါးပိုငျး ခှဲပွီးတော့ –
အပိုငျး(က) ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောရဲ့ အခနျးကဏ်ဍ
အပိုငျး(ခ) ဘယျသူက ကိုယျ့နိုငျငံသား ဆိုတာကို ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျခှငျ့
အပိုငျး(ဂ) အာနနျကျောမရှငျရဲ့ တခွားပွဈခကျြမြား
အပိုငျး(ဃ) ဆိုးကြိုး ဖွဈလာနိုငျခွအေလားအလာ
အပိုငျး(င) နိဂုံး –
ဆိုပွီးတော့ အပိုငျးငယျ ငါးပိုငျးခှဲပွီးတော့ အကဉျြးသဘော တငျပွသှားမှာ ဖွဈပါ တယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ-၄ မှာ ဘယျလို ပွဋ်ဌာနျးထား သလဲ ဆိုတော့ “နိုငျငံတျော၏ အခြုပျအခွာအာဏာသညျ နိုငျငံသားမြားထံမှ ဆငျးသကျပွီး နိုငျငံတျောတဈဝှမျးလုံး၌ တညျသညျ” လို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး မှာရှိတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျနိုငျငံသားမြားဆီက ဆငျးသကျလာတဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာဟာ မဲပေးရှေးခယျြလိုကျတဲ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ကိုယျစားလှယျမြားအားဖွငျ့ လှတျတျောသုံးရပျဆီကို ရောကျသှားစပေါတယျ။ အဲသလိုရောကျသှားစတေဲ့ လှတျတျောသုံးရပျထဲမှာ ရခိုငျပွညျနယျ လှတျတျောလညျး အပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ပွညျနယျလှတျတျောဆီကို သကျဆိုငျရာ ပွညျနယျမဲဆန်ဒရှငျတှဆေီက အခြုပျအခွာ အာဏာတှေ စီးဆငျးသကျရောကျလာတဲ့အပွငျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေို ၎င်းငျးတို့ကိုယျစား စုပေါငျးကိုယျစားပွုပွောဆိုခှငျ့ပါ တပါတညျး ပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ပုဒျမ-၄၉(ဋ) အရ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အစိတျအပိုငျးဖွဈတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျဟာ ပုဒျမ-၁၁ ရဲ့ ပုဒျမခှဲ (က) နဲ့ (ခ) တို့အရ နိုငျငံတျောအခြုပျအခြာအာဏာရဲ့ အာဏာသုံးရပျကို ခှဲဝေ အပျနှငျးခွငျးခံရပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျရဲ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောဆီကိုလညျး အာဏာ တှေ ခှဲဝအေပျနှငျးခွငျး ခံရတာ ဖွဈပါတယျ။
ပုဒျမ-၆(စ) အရ အမြိုးသားနိုငျငံရေးဦးဆောငျမှုအခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျမယျ့၊ နောကျ ပွီးတော့ . . . ပုဒျမ-၂၀(စ) အရ နိုငျငံတျောရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေို ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျရမယျ့ တပျမတျောဟာ ပုဒျမ-၁၆၁(ဃ) အရ တပျမတျောသား လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှကေို ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောရဲ့ အစိတျအပိုငျးအဖွဈ ခနျ့အပျပါတယျ။
အဲဒီတော့ အထကျက ဖျောပွခဲ့သလို နိုငျငံသားတှဆေီက ဆငျးသကျတဲ့ အခြုပျ အခွာ အာဏာ၊ နောကျပွီးတော့ ခှဲဝအေပျနှငျးခွငျးခံရတဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာ တို့နဲ့တကှ တပျမတျောရဲ့ ပါဝငျမှုတို့ဖွငျ့ ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောဟာ လုပျငနျးတှကေို ဆုံးဖွတျ ဆောငျရှကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ပုဒျမ-၃၅၄(က) အရ နိုငျငံသားတိုငျးဟာ မိမိ၏ ယုံကွညျခကျြ၊ ထငျမွငျယူဆခကျြ မြားကို လှတျလပျစှာ ထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့၊ ရေးသားဖွနျ့ဝခှေငျ့ ရှိတယျ လို့ ပွဋ်ဌာနျးထား တယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျမြားစှာတို့က မဲဆန်ဒရှငျတှကေ ဒီ အာနနျကျောမရှငျအား အသိအမှတျမပွုနိုငျ လကျမခံနိုငျတဲ့ အကွောငျးကို ဖျောပွပွောဆိုကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီလို လကျမခံနိုငျတဲ့ အကွောငျးကိုလညျး မိမိတို့ကို စုစညျးကိုယျစားပွုတဲ့ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှကေတဈဆငျ့ ပွညျနယျလှတျတျောကနပွေီးတော့ ထပျဆငျ့ ဆုံးဖွတျ ဖျောပွကွ စလေိုပါ တယျ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ ပုဒျမ-၄ အရ နိုငျငံသားမြားဆီက ဆငျးသကျတဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာ အရ . . . နောကျပွီးတော့ ပွညျသူတို့အပျနှငျးထားတဲ့ စုပေါငျးကိုယျစားပွုပွောဆိုခှငျ့အရ . . . အာနနျကျောမရှငျကို ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောအနဖွေငျ့ လုံးဝ အသိအမှတျမပွုကွောငျး ဒီ အရေးကွီးအဆိုအား ဆှေးနှေးအတညျပွုကွဖို့ကို အခွားမညျသညျ့လှတျတျောတဈခုခုရဲ့ လကျအောကျခံမဟုတျတဲ့ . . . သီးခွားလှတျတျောတဈခုဖွဈတဲ့ . . . ရခိုငျပွညျနယျ လှတျတျောမှာ တငျသှငျးရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျတဲ့ အဆိုတဈခုကို ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလ (၆) ရကျနမှေ့ာ နပွေညျတျောက ပွညျသူ့လှတျတျောမှာ ဆှေးနှေးဆုံးဖွတျခဲ့ပွီးပါပွီ။ ပွညျသူ့လှတျတျောမှာ ဆှေးနှေးဆုံးဖွတျပွီး ဖွဈစကောမူ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျနတေဲ့ ကာယကံရှငျပွညျနယျဖွဈတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျက လှတျတျောရဲ့ သဘောထားဟာ နိုငျငံရေးအရရော သမိုငျးအဓိပ်ပါယျအရပါ အလှနျအရေးကွီးတဲ့အတှကျ ဒီရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောမှာ ဒီအရေးကွီးအဆိုကို တငျသှငျး ရခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဒီအခြိနျ ဒီနရောမှာ ဒီလိုဆှေးနှေးခဲ့ကွတယျ ဒီလို ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတယျ ဆိုတာဟာ လကျရှိ ဒီကနတေ့ငျမက နောငျတဈခြိနျ အနီးအနာဂတျ မှာရော အဝေးအနာဂတျမှာပါ အရေးကွီးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
အပိုငျး(ခ) ဘယျသူက ကိုယျ့နိုငျငံသားဆိုတာကို ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျခှငျ့
၁၉၃၀-ခုနှဈလောကျကတညျးလောကျကပဲ နိုငျငံတဈနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံသားဟုတျ/မဟုတျ ဆုံးဖွတျခွငျးကိစ်စဟာ သကျဆိုငျရာနိုငျငံရဲ့ကိစ်စသာ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ ယဘေုယမြူကို နိုငျငံတကာမှာ လကျခံ ဆုံးဖွတျထားကွပွီး ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၃၀ The Hague မွို့မှာ ကငျြးပ တဲ့ နိုငျငံတကာ ဥပဒဆေိုငျရာ အစညျးအဝေးက နိုငျငံသားဖွဈမှုဥပဒတှေနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ သဘောတူညီခကျြ ကှနျဗနျးရှငျးတဈခု (အင်ျဂလိပျလို) Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law ကို သဘောတူအတညျပွုနိုငျခဲ့ကွတယျ။ အဲသညျကှနျဗနျးရှငျးရဲ့ ပထမဆုံးပုဒျမ article 1 ပထမဆုံးစာကွောငျးက ဒီလို ဆိုပါတယျ။ It is for each State to determine under its own law who are its nationals. ဘယျသူဘယျဝါဟာ မိမိတို့နိုငျငံသား ဖွဈတယျ ဆိုတာကို သတျမှတျဖို့ဟာ သကျဆိုငျရာ နိုငျငံက ၎င်းငျးတို့နိုငျငံရဲ့ဥပဒအေရသာလြှငျ ဆုံးဖွတျရမယျ့ကိစ်စ ဖွဈတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ မိမိတို့ နိုငျငံတဈခုခငျြးရဲ့ သီးခွားကိစ်စသာလြှငျ ဖွဈတယျ လို့ ဆိုတာဖွဈပါတယျ။ လိုရငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျတော့ တစုံတဈယောကျကို နိုငျငံသားပေးတယျဆိုတာ အဲသညျနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာ ကိစ်စသာလြှငျ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို သကျဆိုငျရာနိုငျငံတှရေဲ့ သီးခွားကိစ်စ၊ သကျဆိုငျရာနိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခြာ အာဏာ နဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ကိစ်စတဈခုကို ဆုံးဖွတျလုပျဆောငျနိုငျဖို့အရေးအတှကျ အကွံဉာဏျ ပေးဖို့ရာ တာဝနျအပျနှငျးတဲ့ကျောမရှငျတဈရပျအား နိုငျငံခွားသားတဈဦးကို ဦးဆောငျခိုငျး တာ၊ ပွီးတော့ တခွား နိုငျငံခွားသားနှဈဦးပါနတော၊ သူတို့ကို မိမိတို့ရဲ့ ပွညျတှငျးရေးကိစ်စ ကို ဝငျရောကျစှကျဖကျပွောဆိုပိုငျခှငျ့ပေးလိုကျတာဟာ နိုငျငံသူနိုငျငံသားတှေ အနနေဲ့ အမြားကွီး အရှုံးထှကျနပွေီးသား ဖွဈသှားပါပွီ။
ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂရဲ့ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးခြုပျဟောငျး မစ်စတာကိုဖီအာနနျလို နိုငျငံတကာပုံရိပျမွငျ့တဲ့လူတဈဦးနဲ့ ကျောမရှငျဖှဲ့ပွီးတော့ ရခိုငျပွညျနယျရောကျ စဈတကောငျးသားဘင်ျဂါလီတှကေိစ်စကို ဒီလိုပွောဆိုခှငျ့ပေးလိုကျတာဟာ ဒီကိစ်စကို မိမိတို့ က မိမိတို့ဥပဒေ အတိုငျးဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးပွဿနာ နိုငျငံသားဖွဈမှု ကိစ်စ ကိုယျ့ပွညျတှငျးရေးကိစ်စအဖွဈ ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့စီရငျပိုငျခှငျ့ထဲမှာရှိနရောကနပွေီးတော့ နိုငျငံတကာပွဿနာ ဖွဈအောငျ ဆှဲတငျလိုကျပွီးသကာလ နိုငျငံပွငျပကမဆိုငျသူတှကေ ဒီကိစ်စမှာ ဝငျရောကျပွောဆိုစှကျဖကျခှငျ့ နဲ့ ဆုံးဖွတျရာမှာ သွဇာလှမျးမိုးနိုငျခှငျ့ ရယူနိုငျ အောငျ လုပျပေး လိုကျရာကသြှားပါတယျ။
မစ်စတာကိုဖီအာနနျဦးဆောငျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာအကွံပေးကျောမရှငျ ဖှဲ့စညျးမှု ရဲ့ အခွားသောပွဈခကျြတှကေို ပွောရမယျဆိုရငျ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ။ တျောတျောမြားမြားကတော့ မွငျသိနသေူတှကေ ထောကျပွပွီးသား ဆှေးနှေးပွပွီးသား အခကျြတှေ ဖွဈပါတယျ။
(၁) ရခိုငျလူထုရဲ့ သဘောထား၊ သဘောတူညီခကျြကို တငျကွိုရယူမှု မရှိခဲ့တာ ဖွဈ ပါတယျ။ ဒီလိုကိစ်စရပျတှကေို သုံးသပျအကွံပေးဖို့ ဒီလိုလူတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျမယျ ဆိုတာကို ရခိုငျပွညျသူတှကေို အဓိကကိုယျစားပွုတဲ့ နိုငျငံရေးအဖှဲ့အစညျးကို အရေးအရာ ပွုလို့ အဖကျလုပျလို့ တိုငျကိုမတိုငျပငျခဲ့တာကိုလညျး မွငျခဲ့ရပါတယျ။ (ANP ကို တခကျြ လောကျ ကွိုပွီးတော့ ဆှေးနှေးပေးထားပါဆိုပွီးတော့ ကျောမရှငျကိုဦးဆောငျမယျ့သူ ကိုယျတိုငျက မတ်ေတာရပျခံခဲ့တာကိုတောငျ ဂရုကို မစိုကျတာ ဖွဈပါတယျ)။
(၂) နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာဥပဒအေရ နိုငျငံတျောအဆငျ့ ကျောမရှငျ တဈရပျ ဖှဲ့စညျးခှငျ့ကို ခှငျ့ပွုပွဋ်ဌာနျးပေးထားတာ မရှိဘဲနဲ့ ကြျောလှနျလုပျဆောငျ ဖှဲ့စညျး ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ၊ (ဒါ့အပွငျ ဝနျကွီးဌာန တဈခုသာဖွဈတဲ့ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံး ဝနျကွီးဌာနဟာ ဒီလို နိုငျငံတျောအဆငျ့ကျောမရှငျတဈရပျကို ဖှဲ့စညျးခှငျ့မရှိပါဘူး)၊ ဒါကွောငျ့ ဒီကျောမရှငျဟာ စတငျဖှဲ့စညျးစဉျကတညျးက အလိုအလြောကျပကျြပွယျပွီး ဖွဈ ပါတယျ။ ဒီကျောမရှငျဟာ တရားဝငျမှုမရှိပါဘူး။
(၃) ဒီကျောမရှငျလညျပတျဖို့ ရံပုံငှကေို ဘယျကရသလဲ။ နိုငျငံတျောကခပြေးတယျ ဆိုရငျကော ဘဏ်ဍာငှရေယူမှုဟာ နညျးလမျးတကြ ဖွဈရဲ့လား။ ပွငျပအကူအညီ ဖွဈနေ တယျဆိုရငျကော စတေနာရိုးနဲ့ကူညီတဲ့ အကူအညီဟုတျမှ ဟုတျရဲ့လား။ ဒီလိုဖွဈလာ အောငျ OIC ဘကျကနပွေီးတော့ တညျထားတာ ကွာပွီ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျခငျလောကျ ကတညျးက စီစဉျနတောဖွဈတယျ လို့ပွောနကွေတာကော ဟုတျနိုငျပါသလား။ မေးစရာ တှရှေိပါတယျ။
(၄) နိုငျငံတျောအဆငျ့အဖှဲ့အစညျးတဈရပျရဲ့ ခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ ရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွကို နိုငျငံခွားသားတဈဦး ဦးဆောငျတဲ့ ဒီ အာနနျကျောမရှငျထဲမှာ အဖှဲ့ဝငျအနနေဲ့ ထညျ့ထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒီလိုထညျ့တာဟာ protocol နဲ့ ညီမညီကို စဉျးစားစရာ ရှိပါတယျ။
(၅) ကျောမရှငျမှာပါဝငျတဲ့ နိုငျငံခွားသား သုံးဦးရဲ့ဘကျလိုကျမှု ကငျးခွငျး/မကငျး ခွငျးဟာ သံသယမကငျးဖှယျ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မစ်စတာ ဂါဆနျဆလမျ ဟာ International Crisis Group ဘုတျအဖှဲ့ရဲ့ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈပွီးတော့၊ Open Society Institute ရဲ့ ဘုတျအဖှဲ့ဝငျလညျး ဖွဈတယျ လို့ သိရတယျ။ International Crisis Group ဟာ ရခိုငျပွညျရောကျ စဈတကောငျးသားဘင်ျဂါလီမြား နဲ့ပတျသကျလို့ တဈဖကျသတျ ရေးသားမှုတှပေါတဲ့ အစီရငျခံစာ ရေးသားဖူးတဲ့ အဖှဲ့အစညျးဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ Open Society Institute ဟာလညျး ရခိုငျပွညျရောကျ စဈတကောငျးသားဘင်ျဂါလီ မြား ဘကျက အားတကျသရော စိတျရောကိုယျပါ ပါနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတဈရပျဖွဈတယျ။ သူခိုး နဲ့ အိမျရှငျဘကျမှာ သူခိုးဘကျက ဘကျလိုကျနတေဲ့ သဘောရှိတဲ့ အဖှဲ့အစညျး ဖွဈပါ တယျ။
(၆) ရခိုငျပွညျကိုရောကျနတေဲ့ စဈတကောငျးသားဘင်ျဂါလီတှပွေဿနာမှာ လိုအပျ နတောက ဒီနိုငျငံခွားသားတှရေဲ့ ကွားနမှေုကို လိုအပျနတောမဟုတျပါဘူး။ မှနျကနျတဲ့ ဘကျက ဘကျလိုကျရပျတညျမှုကိုသာလိုအပျနတော ဖွဈပါတယျ။ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး ပွဿနာကို အရှိအတိုငျး ရှငျးလငျးဖွရှေငျးဖို့ကသာလြှငျ လုပျဆောငျရမယျ့ နညျးလမျးဖွဈ ပါ တယျ။ သူခိုး နဲ့ အိမျရှငျအကွားမှာ ကွားနခွေငျး ဘကျလိုကျမှုမရှိခွငျးဟာလညျး သူခိုးဘကျ က ဘကျလိုကျခွငျး တဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။
(၇) မစ်စတာကိုဖီအာနနျကိုယျတိုငျ စဈတကောငျးသားဘင်ျဂါလီတှရေဲ့ လူမြိုးလိမျ နာမညျကို ယခုအခါ သုံးစှဲပွောဆိုနပေါတယျ။ ဒါဟာ ပဋိပက်ခကွီးမားအောငျ လုပျဆောငျ နရော ရောကျပါတယျ။ ဒါဟာ လကျခံနိုငျဖှယျရာ လုံးဝမရှိတဲ့ အခွအေနဖွေဈပါတယျ။ ဒီကျောမရှငျအနနေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးက ဒသေခံတိုငျးရငျးသားတှကေို နဈနာအောငျ ဆောငျရှကျသှားဖှယျ ရှိတယျဆိုတာကို သိသာစတေဲ့ ပွောဆိုခကျြလညျး ဖွဈပါတယျ။
အပိုငျး (ဃ) ဆိုးကြိုး ဖွဈလာနိုငျခွအေလားအလာ
သူခိုး နဲ့ အိမျရှငျကွားက အဆုံးအဖွတျဟာ အိမျရှငျရဲ့ မိမိကိုယျကိုကာကှယျပိုငျခှငျ့ နဲ့ အိမျရှငျရဲ့မိမိအသကျအိုးအိမျစညျးစိမျတှကေို ကာကှယျပိုငျခှငျ့တို့ကသာလြှငျ အဆုံး အဖွတျ ဖွဈစရေမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကာကှယျခှငျ့တှကေ အဆုံးအဖွတျ ဖွဈရမယျ့အစား သူခိုးရဲ့ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှကေ ကွားကဝငျလာပွီးတော့ ငါတို့ဝငျဆုံးဖွတျပေးမယျ ဆိုတာ ဟာ မဆုံးဖွတျရသေးခငျကတညျးက အိမျရှငျကို အရှုံးပေးလိုကျတာနဲ့ အတူတူပဲ ဖွဈပါ တယျ။
လူအခှငျ့အရေးစုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျမှာ မဟုတျဘူး . . . ရဲလုပျငနျးလို စုံစမျး စဈဆေးတာတှေ လုပျမှာ မဟုတျဘူး လို့ မညျမြှပငျဆိုစကောမူ လုံခွုံရေးအမွငျရှိသူတှေ အနနေဲ့ ရှကေို့လှမျးမြှျောတှကျခကျြကွညျ့လိုကျရငျ ဒီကျောမရှငျရဲ့ ဝငျရောကျစှကျဖကျ ပါဝငျနမှေုဟာ စိတျမကနြေပျဖှယျရာ ဖွဈပါတယျ။ အစရှိ နောငျနောငျ ဆိုသလို နိုငျငံခွားသား ဝငျရောကျစှကျဖကျ လုပျဆောငျမှုတှေ နောငျအခါမှာ အကငျြ့ပါ လုပျဆောငျခွငျးရဲ့ အစဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
ကျောမရှငျအနနေဲ့ “ပွညျပနိုငျငံမြားတှငျ ဒုက်ခသညျအဖွဈ ခံယူသူမြား၏ ပငျရငျး နိုငျငံနှငျ့ နောကျခံအကွောငျးအရာ အပါအဝငျ နိုငျငံတကာဆကျနှယျမှုတို့ကိုလညျး” သုံးသပျသှားမယျလို့ ပွောထားတာဟာ အလှနျတရာ အန်တရာယျကွီးတဲ့အခကျြတဈခကျြ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကလာတာပါလို့ ပွောပွီး နိုငျငံတကာမှာ အနခြေောငျအစားခြောငျအောငျ လုပျကွံပွောဆိုခိုလှုံနကွေသူ အရအေတှကျ သနျးခြီတယျလို့ ဆိုကွတဲ့ ဘင်ျဂါလီမြားအနနေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ လာရောကျ အခွစေိုကျနိုငျအောငျ လမျးဖှငျ့ပေးတဲ့မှတျခကျြတှကေိုသာ ဒီကျောမရှငျကသာ ပေးခဲ့မယျဆိုရငျ ရခိုငျပွညျနယျရဲ့ ခှဲဝရေရှိထားတဲ့အခြုပျအခွာအာဏာ ကဆြုံးသှားဖို့ လမျးစဖွဈတယျ။ ဒီကနတေဈဆငျ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဘင်ျဂါလီတှရေသှားတဲ့ ကွီးကွီးမားမား ခွကေုတျစခနျးကနေ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးကဆြုံးသှားစဖေို့ကို သူတို့ ဆငျ့ကဲ လုပျဆောငျ သှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အခုကတညျးကိုက လူမြိုးလိမျနာမညျကို ထညျ့သှငျးပွောဆိုနသေူ ကိုဖီအာနနျ ဦးဆောငျတဲ့ ဒီကျောမရှငျရဲ့ အစီရငျခံစာဟာ ဘင်ျဂါလီမြားရဲ့တဈဘကျလှုပျရှားမှုကို အစဉျအဆကျ လုပျဆောငျလာသူမြားအတှကျ နိုငျငံတကာမှာ အစဉျအဆကျ ကိုးကားစရာ တဈခု ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီအစီရငျခံစာဟာ အမြားသိအောငျ ထုတျပွနျမှာ မဟုတျဘူးလို့ အာမပငျခံစကောမူ အမြားသိနိုငျတဲ့ နရောကို အနှေးနဲ့ အမွနျရောကျလာမှာ မုခပြဲ ဖွဈပါ တယျ။
အပိုငျး (င) နိဂုံး
ရခိုငျပွညျနယျမှာဖွဈတဲ့ ရခိုငျပွဿနာကို ဖွရှေငျးတဲ့နရောမှာ ဒသေခံ ရခိုငျ တိုငျးရငျးသားမြားရဲ့ သဘောဆန်ဒသာလြှငျ အဓိကအကဆြုံး အရေးအပါဆုံး ဖွဈပါတယျ။ ရခိုငျလူမြိုးတှလေကျမခံနိုငျတဲ့ ဘယျနညျးလမျးနဲ့မဆို ဖွရှေငျးစကောမူ၊ ဒီပွဿနာ ပွလေညျသှားနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ရခိုငျလူမြိုးတှလေကျမခံနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုခုနဲ့ ဖွရှေငျးရငျ ဒီပွဿနာကို ပိုမိုကွီးထှားလာအောငျ လုပျရာသာ ရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒသေခံရခိုငျလူမြိုးမြားရဲ့ သဘောတူညီခကျြကို မရယူဘဲနဲ့ ဖှဲ့စညျးလုပျဆောငျခဲ့တာဟာ ဒီကျောမရှငျရဲ့ပွဈခကျြမြားစှာထဲမှာ ကွီးမားတဲ့ ပွဈခကျြကွီး ဖွဈပါတယျ။
အခြုပျသဘောကို ပွောရရငျတော့ – တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးကို ဆိုးကြိုးအလားအလာ ပေးနိုငျခွမြေားတဲ့ ဒီကျောမရှငျကို ဖွဈနိုငျသမြှ နညျးလမျးမြိုးစုံနဲ့ ဆနျ့ကငျြသှားဖို့လိုပါတယျ။
ဒီကျောမရှငျဟာ တညျဆဲဥပဒတှေကေို ကြျောလှနျဖှဲ့စညျးခဲ့တာ ဖွဈတဲ့အတှကျ စတငျ ဖှဲ့စညျးစဉျကတညျးက အလိုအလြောကျပကျြပွယျပွီးဖွဈပါတယျ။ တရားဝငျမှု မရှိပါ ဘူး။ နောကျပွီးတော့ ဒီကျောမရှငျရဲ့ ဖှဲ့စညျးဖွဈတညျလာမှုကို ကြှနျတျောတို့ အသိအမှတျ မပွုဘူး။ ဒီ ကျောမရှငျရဲ့ လကျရှိလညျပတျလုပျဆောငျနမှေု တှကေိုလညျး ကြှနျတျောတို့ အယုံအကွညျ မရှိဘူး၊ လကျမခံနိုငျပါဘူး။ အကောငျးဆုံးက ဒီကျောမရှငျကို ဖကျြသိမျး လိုကျတာ အကောငျးဆုံးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကျောမရှငျကို ဖကျြသိမျးသညျဖွဈစေ မဖကျြသိမျးသညျဖွဈစေ သခြောတာကတော့ ဒီကျောမရှငျကို ကြှနျတျောတို့က လုံးဝ အသိအမှတျမပွုဘူး ဆိုတဲ့အခကျြ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြကို ရခိုငျပွညျနယျထဲက နိုငျငံသား မဲဆန်ဒရှငျတှရေဲ့ တဈဦးတဈယောကျခငျြးဆန်ဒတှအေဖွဈ ဖျောပွနမေယျ့အစား ရခိုငျ ပွညျနယျလှတျတျောရဲ့ မွှကျဟဖျောပွခကျြ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုအဖွဈ ဆုံးဖွတျခကျြခပြွီး ဖျောပွမှသာလြှငျ နောငျအခါ ကရြောကျလာနိုငျခွရှေိတဲ့ ဒီကျောမရှငျရဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှကေို တှနျးလှနျနိုငျဖို့ အငျအားရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော ယခုတငျသှငျးတဲ့ အရေးကွီးအဆို “ကိုဖီအာနနျဦးဆောငျသော ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာအကွံပေးကျောမရှငျအား ဖှဲ့စညျးခဲ့ခွငျးသညျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ရခိုငျအပါအဝငျ တိုငျရငျးသားနိုငျငံသားမြား၏ သဘောတူညီခကျြကို ရယူလကျြ ဖှဲ့စညျး ခဲ့ခွငျး မဟုတျသညျ့အတှကျ ထိုကျောမရှငျ၏ ဖှဲ့စညျးဖွဈတညျမှု နှငျ့ လုပျဆောငျခကျြမြား အားလုံးကို ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောက အသိအမှတျမပွုသငျ့ကွောငျး အရေးကွီးအဆို” ဒီ အရေးကွီးအဆိုကို ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောအနနေဲ့ ဆှေးနှေးအတညျပွုပွီးတော့ ဒီကျောမရှငျ ကို အသိအမှတျမပွုကွောငျး ဆုံးဖွတျခကျြအား အတညျပွုခမြှတျပေး စလေို ပါကွောငျး တိုကျတှနျး ပွောကွားရငျး နိဂုံးခြုပျအပျပါတယျ။
Previous Video | interviewing U Kyaw Zaw Oo by RFA Ko Win Naing
Next နှဈဖကျပွညျသူတှလေို့ ပွောကတညျးက ကနြျောတို့ စရှုံးနပွေီ – ဦးကြျောဇောဦး